London miaraka amin'ny zaza | Vaovao momba ny dia
Misy tanàna izay tena tia mitsidika ankizy satria manolotra dia an-tongotra, tranombakoka, hetsika, endrika mora hitety ... Londres toa izany, a tanàna tsara hitsidihana miaraka amin'ny ankizy. Ny dia lavitra miaraka amin'ny ankizy dia tsy mora na mora vidy, fa indraindray ny safidy dia ny miandry ny ankizy hitombo ka arakaraka ny fandehanan'ny taona.
Noho izany, farafaharatsiny, indraindray dia mila manomana dia miaraka amin'ny ankizy ianao. Esory ny fisalasalana, ny tahotra, mianatra ny fomba fanaovana izany ary mankafy. Iza no mahalala? Angamba ho lasa manam-pahaizana amin'ny fikarakarana fialantsasatra miaraka amin'ny ankizy isika. Andao hojerentsika anio inona no hatao any London miaraka amin'ny ankizy.
Na dia marina aza fa androany, noho ny areti-mandringana Covid-19, manintona maro no nakatona, afaka manomana fotoana isika handaloana ity aretina ity. Ny marina dia Londres dia manana manintona maro hotsidihina miaraka amin'ny ankizy ary maro no maimaimpoana na mora vidy. Eny, eny, misy ihany koa ny lafo, mazava ho azy, i London dia iray amin'ireo renivohitra lafo indrindra any Eropa, saingy betsaka ny azo isafidianana.
Inona avy ireo fisintonana maimaimpoana ho an'ny ankizy any Londres? tranombakoka Betsaka ny tranombakoka any London no maimaim-poana na mandray fanomezana, saingy tsy takiana izany. Mampalahelo fa efa elaela ny governemanta dia manitrikitrika fa mandoa izy ireo ka tsara ny manamarina mialoha. Ao amin'ny tranombakoka malaza indrindra dia misy olona miandry, saingy mbola mendrika izany. Anisan'ireo tranombakoka tsara indrindra any Londres ho an'ny ankizy ireto manaraka ireto:
Museum of History History: Toerana midadasika sy mahafinaritra izy io, manomboka amin'ny tranobe Victoria izay iasany. Misy fampirantiana dinôzôro, T-Rex animatronic, taolana goavambe ary fampirantiana mifandraika. Mangina kokoa izy io mandritra ny fialantsasatry ny sekoly sy amin'ny andro faran'ny herinandro. Amin'ny Krismasy dia esorina ao anaty carousel ny vatabangan-dranomandry.
Tranombakoka anglisy: Egypt Egypty no harena tsara indrindra, miaraka amin'i Rosetta Stone malaza, fa eo koa ireo sivilizasiona Gresy, Roma ary ireo sivilizasiôna aziatika. Ny zavatra tsara dia ny fananana tranom-bakoka ho an'ny ankizy ny tranombakoka. Na dia afaka mihinana ao anaty aza ianao dia tsy mora izany.
tranombakoka siantifika: eo akaikin'ny Museum History Natural, malalaka ny fidirana, ary manana faritra roa ho an'ny ankizy arakaraka ny taonany. Ho an'ireo ankizy kely dia maro ny hetsika siansa mifandray. Tsy dia betsaka loatra ny mpihaino azy toy ny Tantaran'ny Voajanahary ka afaka mijanona ianao raha tsy tianao ny vahoaka.
V&A Museum: Mety ho an'ny ankizy ihany koa izy io na dia tsy betsaka noho ny roa aza. Any ambony rihana dia asehoy ny akanjon'ny mpitendry mozika malaza ary azonao atao ny manandrana akanjo, ary ny rihana ambany dia misy fampirantiana kanto sy endrika. Manana torolàlana am-peo izy io, tranombakoka mangina tokoa ary tsara ny cafeteria misy azy.
Tate Modern: Marina ve? Eny, ho tianao ny fampirantiana ny rindrin'ny Wall of Art ary raha tianao i Dalí, tena tsara tarehy ny fanangonana.
Amin'ity lisitra ity dia afaka manampy ny National Gallery of Art, raha mbola tia zavakanto ny zanakao na maniry hahalala an'ity tontolo ity. Ankoatra ireo tranombakoka fanta-daza ireo dia afaka manome anarana vitsivitsy isika tranombakoka tsy mahazatra mety ho liana amin'ny ankizy: ny Tranombakoky ny Ankizy, miaraka amina kilalao marobe, ny Museum of Zoology, miaraka amin'ny taolana sy taolana an-jatony, ary ny Tranombakoky ny tranomaizina Clink izay miasa ao amin'ny fonja taloha sy tena izy.
Etsy ankilany, hetsika mampiseho fisalasalana azo antoka fa ny Fanovana ny mpiambina ao amin'ny lapan'i Buckingham ary ny matso mpitaingin-tsoavaly any Whitehall. Samy nitranga tamin'ny 11 ora maraina izy ireo, saingy ny tena marina, ny fiovana tany Buckingham dia somary aloha kokoa, 10:30 maraina, satria miala eo ny mpiambina Wellington Barracks, manoloana ny St. James Park, ary amin'ny 11 dia manao ilay fanovana mivaingana izy ireo. Ireo hetsika ireo dia mety miovaova arakaraka ny vanim-potoana ihany koa ka anjaran'ny ray aman-dreny ny mijery ny fandaharam-potoana.
Afaka mandeha any amin'ny ankizy ianao fantaro ny Kianjan'ny Trafalgar fahatsiarovana ity ady ity nandritra ny Ady Napoleonika. Any afovoan'i Londres izy io ary manana ny sarivongan'i Admiral Nelson izay maty tamin'ny ady. Ny kianja dia toerana fialan-tsasatra sy fitsangatsanganana.
Ny dia tsara iray hafa atao amin'ny ankizy dia ny fanaovana ny Fitsangatsanganana Hop On Hop Off. Ny ankamaroan'ny fiara dia tsy misy tafo ka raha tsara kokoa ny andro dia tsara kokoa aza. Matetika no miovaova ny tapakila ary mitondra anao manerana ny tanàna ny bus miaraka amin'ny hevitra mahafinaritra.
Satria miresaka fitaterana ... Ahoana no mahamety ny fivezivezena miaraka amin'ireo ankizy any Londres? Fanontaniana tsara. Tokony ho fantatrao izany tototry ny ora be ny metro (7:30 ka hatramin'ny 9:30 maraina ary 4:30 ka hatramin'ny 6:30 hariva). Vitsy ny ascenseur izay miakatra sy midina amin'ny arabe, raha sanatria manana kitapo na sarety ianao. Ny bisy misy dozabe dia azo tian'ny ankizy, na dia manam-bola aza ianao dia mety foana ny taxi. Na Uber.
Ilaina ny mahafantatra fa ny ankizy latsaky ny 11 taona dia miaraka amin'ny olon-dehibe mandeha maimaim-poana amin'ny bisy, metro ary DLR, fa tsy amin'ny fiaran-dalamby izay tokony ho latsaky ny 5 taona. Ny mifindra manodidina an'i Londres dia tsara raha manana ny Karatra Oyster na karatra fitsangatsanganana hafa nanomboka tamin'izay ny ankamaroan'ny fisarihana dia ao anatin'ny faritra 1 sy 2. Azonao atao ihany koa manofa bisikileta an'ny Boris Bikes, manerana ny tanàna. Tsy haiko raha mandeha an-dalambe fa tsara izy ireo mahita ny valan-javaboary.
Raha izany no izy, andao mankany amin'ireo toerana manintona ankizy any Londres. ny London Eye sy ny Sea Life Aquarium izy ireo dia tena soso-kevitra. Ny mitaingina ny kodiarana Ferris dia maharitra antsasak'adiny ary tsara ny fahitana panoramic. Misokatra manomboka amin'ny 10 maraina isan'andro ary tsara ny hividy tapakila an-tserasera. Raha ny marina dia misy combo atolotra: London Eye, sambo fitsangantsanganana ary Tranombakok'i Madame Tussauds.
Ny zava-manintona iray naroso koa dia ny Tilikambon'i Londres miaraka amin'ny tantarany macabre, na ny Tranomaizina any Londons. ny mandehandeha manamorona ny ony manampy ihany koa izy io ary toy ny fitsangantsanganana amin'ny hop bus, dia misy fitsangantsanganana koa miaraka amin'ity fomba ity. Misy dock mihoatra ny 10 manerana an'i Londres.
Raha tia kilalao ny zanakao dia mila mitsidika ny Fivarotana kilalao an'i Hamley, lehibe indrindra eto an-tany, miaraka amin'ireo rihana fito feno kilalao isan-karazany. Raha tianao koa i Lego, dia mila mihazakazaka amin'ny rihana fahadimy izay ankalazana ny enina am-polony taona an'ity marika ity ianao.
Tranonkala malaza iray hafa any Londres dia ny Zoo Londes, ny tranainy indrindra eto an-tany misy mpitsidika tapitrisa mahery isan-taona. Misy trano mandady, Aquarium, liona, lemurs, penguin, gidro ary maro hafa.
Ny zoo dia ao anatin'ny Regent Park, tranokala tsara tarehy misy zaridaina mahafinaritra, misy teboka hita eo amin'ny Primrose Hill izay manana fomba fijery tsara momba ny renivohitra Anglisy ihany koa. Ho an'ny ankizy faralahy dia toerana mety hilalaovana no Zaridaina Fahatsiarovana Princess Princess Wales, ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona, miaraka amina sambo piraty goavambe.
Raha ny marina, I London dia manana zaridaina sy zaridaina tsy hita isa. Araka ny hitanao, London dia manana zavatra betsaka ho hita sy atao amin'ireo ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra, fa ho hitanao ihany koa fa maro ireo kilasika London izay tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny inona no hatao amin'ny ankizy any London.
Ohatra? Westminster Abbey, Katedraly St. Paul… afa-tsy ireo trano fivavahana lehibe sy taloha ary fasana no manintona azy ireo. Indraindray dia miankina amin'ny karazana ray aman-dreny ananan'izy ireo izany. Ny raiko, ohatra, dia tia tantara, ka ny dia ataoko dia misy hatrany ny toerana misy ifandraisany amin'ny tantaran'izy ireo.
Farany, manana maro i London teatra Ary koa ary rehefa mandalo ny areti-mandringana dia azonao atao ny mitondra ny ankizy any amin'ny sasany mozika ho an'ny ankizy toa an'i Harry Potter.
Raha miresaka an'ity andiany ity dia afaka miala kely amin'ny tanàna kely foana ianao ary manakaiky kokoa ireo studio. Harry Potter ao anatin'ny Warner Bros Studios. Azonao atao koa ny mandray azy ireo hahalala Stonehenge, 140 kilometatra miala, Oxford, 83 kilometatra lavitra, azo aleha amin'ny lamasinina sy bus, ny Costwolds sy ny tanàna mahafatifaty ... Ary afaka mitohy ny lisitra, safidinao. Mirary anao ho tsara vintana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » London miaraka amin'ny ankizy
Inona no ho hita any Eguisheim, Alsace